JA Solar waxay bixisaa koronto cagaaran ciyaaraha soo socda ee Beijing
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » JA Solar waxay bixisaa koronto cagaaran ciyaaraha soo socda ee Beijing
Iyada oo ah taageere horumarinta cagaaran, JA Solar ayaa si firfircoon ugu biirtay diyaarinta bixinta koronto cagaaran ciyaaraha soo socda ee Beijing. Waxay ku taal Zhangjiakou, Gobolka Hebei, Guyuan 200MW xanaanada xoolaha iyo mashruuca is dhexgalka cadceedda ayaa siin doona koronto cagaaran munaasabada isboorti ee caanka ah oo leh dhammaan qaybaha waxtarka sare leh ee JA Solar ee monocrystalline. Mashruucu waxa uu soo saari doonaa celcelis ahaan 430 milyan kWh koronto sannadkii, taas oo u dhiganta in la dhimo isticmaalka dhuxusha 129,000 oo tan iyo qiiqa kaarboon-dioxide 300,000 oo tan.
Isku darka dhaqashada xoolaha iyo korontada PV, mashruuca, oo si fiican ula qabsaday cimilada cimiladu daaqa ah ee Guyuan, ayaa siinaysa quudin ku filan xoolaha iyadoo sidoo kale dhalinaysa koronto badan, si wax ku ool ah loo isticmaalo kheyraadka dhulka si loo gaaro faa'iidooyinka guul-guud ee labadaba dhaqaalaha iyo deegaanka.
Sida darawalka hal-abuurka tignoolajiyada ee warshadaha PV, JA Solar waxaa ka go'an in ay kor u qaaddo isdhexgalka wax soo saarka, baridda iyo cilmi-baarista. Magaalada Zhangjiakou, oo ah magaalo ay wada-jir marti galiyaan ciyaaraha, waxaa dhawaan loo qabtay tartankii 3-aad ee Solar Decathlon China(SDC) sidii loo qorsheeyay. Waxaa kafaala qaaday JA Solar, oo ay nakhshadeeyeen kooxaha SolarArk 3.0 iyo XJTU+, guryaha tamarta-badbaadinta ee leh nidaamyada qoraxda ayaa si guul leh loo dhisay. Guryaha-eco-guriga, oo lagu rakibay JA Solar DeepBlue 3.0 qaybaha waxtarka sare leh oo loogu talagalay "horumar waara, isku-xirnaan caqli-gal ah, iyo caafimaadka bini'aadamka," ayaa tusaale u ah horumarinta iyo codsiga sawir-qaadista.
Dhacdada aadka loo sugayo ee ka dhaceysa Beijing, ayaa lagu wadaa in lagu diiwaan geliyo taariikhda marka la eego dhexdhexaadnimada kaarboonka adduunka, markii ugu horreysay taariikhda 100-sano, dhammaan goobaha 100% waxaa dabooli doona koronto cagaaran.
Horaa loo yidhi: "Biyo saafi ah iyo buuro cagaaran waxay u roon yihiin sida buuro dahab iyo qalin ah." Deegaan nololeed oo wanaagsan ayaa ah waxa aan rabno oo aan u qaadanno ciyaaraha Beijing fursad ahaan, JA Solar waxay rajeyneysaa inay la shaqeyso macaamiisha duug ah iyo kuwa cusub si loo faafiyo fikradda kaarboon-yar iyo horumarka cagaaran iyo kor u qaadista dhismaha Bulshada Kaarboon-ka eber.